cross-manipulator - Shiinaha Langzhi Alxanka Qalabka
Edge alxanka dogob
nidaamka alxanka u eegis
on-line ahama steel
alxanka guddiga jointed
-Qeexidda sare gudaha
mashiinka la xiriirinaya
alxanka rullaluistemadka jeestay
qalabka girth alxanka gaadhya Small
100A Plasma goynta
200A Plasma goynta
300A Plasma goynta
500A Plasma goynta
Dyeing iyo mishiino ku dhameysteen
Tuubooyin bir habboon weldin biibiile
Sheet tusaale ahaan goynta biraha
alxanka weel kuleyliyaha
Dayactirka dareen caadi ah
Arimo guud nidaamka alxanka Our ka kooban iskutallaabta manipulator, alxanka jeestay duuban, rotator alxanka iyo .Appliances kale qalabka kaaliyaha: weel cadaadiska, iyo biibiilaha dhexroor weyn gaadhya & wareeg ah alxanka tollayn iyo cover goobaabin xusulkiisa alxanka habboon. Waxaan anfaco TIG iyo alxanka Plasma, plasma saldhig, tig (silig feed) sida cover .Mid ka-dhanka alxanka, laba-dhinac wax taaj oo kale. ARC biyaha hoostooda sida cover sidoo kale waa shaqaynayaa sida ay alxanka looga baahan yahay technology. Characters: convery flexiblely, co ...
nidaamka alxanka Our ka kooban iskutallaabta manipulator, alxanka jeestay duuban, rotator alxanka iyo .Appliances kale qalabka kaaliyaha: weel cadaadiska, iyo biibiilaha dhexroor weyn gaadhya & wareeg ah alxanka tollayn iyo cover goobaabin xusulka alxanka habboon.
Waxaan anfaco TIG iyo alxanka Plasma, plasma saldhig, tig (silig feed) sida cover .Mid ka-dhanka alxanka, laba-dhinac wax taaj oo kale. ARC biyaha hoostooda sida cover sidoo kale waa shaqaynayaa sida ay alxanka looga baahan yahay technology.
Characters: convery flexiblely, operation.Customize haboon waa la heli karaa si waafaqsan looga baahan yahay.
kala duwan dhererka alxanka 1500mm-12000mm
alxanka kala duwan dhexroor 400-5000mm
xawaaraha gaariga 0-1500mm / min
dhumucdiisuna alxanka 3-30mm
: Previous on-line ahama steel
Next: nidaamka alxanka u eegis
Cinwaanka Factory: No. 20, Tianli Rd. Yangshan Town, Degmada Huishan, Wuxi City, Gobolka Jiangsu, PRC